Hazard oo ka hadlay goolkii uu dhaliyay & guushii ay maanta ka gaareen kooxda Granada – Gool FM
(Madrid) 05 Oct 2019. Eden Hazard ayaa farxad ka muujiyay guushii ay maanta ka gaareen kooxda Granada, isagoo dhinaca kale ka hadlay goolkii cajiibka ahaa uu ka dhaliyay kulankan.
Real Madrid ayaa guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Granada garoonkeeda Santiago Bernabeu, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-2.
Hazard ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan isku dayay in goolkeyga ugu horeeya uu noqdo mid cajiib ah, aad ayaan u faraxsanahay, goolka koowaad markasta way adag tahay sida lagu gaaro, kadibna la helo kalsooni dheeraad ah, waxaan rajeynayaa inaan goolal badan ku dhaliya kooxdan weyn”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay goolka iyo guusha aan gaarnay, marka aad ciyaareyso waxaad mar walba dooneysaa inaad goolal dhaliso laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad guuleysato, waxaan soo bandhignay ciyaar fiican, wali waxaan fadhinaa fiida sare ee hogaanka, taasina waa ujeedkeena xilli ciyaareedkan”.
“Kulanka maanta wuxuu ahaa mid aad muhiim u ah, waxaan maqlay waxyaabo badan maxaa yeelay dadku wax badan ayey ka hadlaan, waxay ii ahayd maalin aad u muhiim ah, su aan u soo celiyo kalsoonideyda”.
“Waxaan gaarnay guul aad u adag, waxaan soo bandhignay wax walba oo awoodeena ah 90-ka daqiiqo, waxaana ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno saddexda dhibcood, mar walba qaab ciyaareedkeena waan wanaajin karnaa, laakiin waa saddex dhibcood muhiim ah”.